Fluoxymesterone poda (76-43-7) Vagadziri & Vanotengesa - Fakisi
Raw Fluoxymesterone powder (76-43-7)
Fluoxymesterone powder (76-43-7) inonzi synthetic androgen, kana hormone yemurume, yakafanana ne testosterone. Fluoxymesterone inoshanda nekuzvibatanidza pachayo kune androgen receptors; izvi zvinokonzera kuti zvibatanidzane nezvikamu zvechiremba zvinobatanidzwa mukugadzira kweprotini. Izvozvo zvinogona kukonzera kuwedzera kwehuwandu hwezvimwe mapuroteni kana kuderera muhuwandu hwevamwe. Aya mapurotini ane zvakasiyana-siyana zvinokonzera, kusanganisira kudzivirira kukura kwemamwe marudzi emasero epabonde emumutsipa, zvichiita kuti masero anokonzera hukama hwepabonde hwemurume, nekusimudzira kugadzirwa kwemasero matsvuku eropa.
Raw Fluoxymesterone powder (76-43-7) video
Raw Fluoxymesterone powder (76-43-7) Tsanangudzo
Raw Fluoxymesterone powder is a form made of testosterone, a hormone sexually occurring hormone that is produced in man's testicles. Zviyero zviduku zve testosterone zvinowanikwawo mumavhii emukadzi uye adrenal system.
Fluoxymesterone powder inoshanda nekuzvibatanidza pachayo kune androgen receptors; izvi zvinokonzera kuti zvibatanidzane nezvikamu zvechiremba zvinobatanidzwa mukugadzira kweprotini. Izvozvo zvinogona kukonzera kuwedzera kwehuwandu hwezvimwe mapuroteni kana kuderera muhuwandu hwevamwe. Aya mapurotini ane zvakasiyana-siyana zvinokonzera, kusanganisira kudzivirira kukura kwemamwe marudzi emasero epabonde emumutsipa, zvichiita kuti masero anokonzera hukama hwepabonde hwemurume, nekusimudzira kugadzirwa kwemasero matsvuku eropa.
Raw Fluoxymesterone powder inoshandiswa mune varume vasingaiti zvakakwana zvezvinhu zvakasikwa zvinonzi testosterone. Muvarume, testosterone inokonzera mabasa akawanda anowanzoitwa, kusanganisira kukura uye kukura kwezvibereko zvemuviri, masimba, uye mapfupa. Inobatsirawo kukonzera kukura kwepabonde kwakakwana (kufaruka) muvakomana. Fluoxymesterone powder yakafanana nesheti ye testosterone yakagadzirwa nemuviri wako. Icho chiri chekirasi yemishonga inozivikanwa se androgens. Inoshanda kuburikidza nehutano hwemitambo mizhinji kuitira kuti muviri unogona kukura nekushanda zvakanaka.
Raw Fluoxymesterone powder inogonawo kushandiswa mune vamwe vakomana vechidiki kuti vaite hupombwe mune avo vane nguva yekupera.
Raw Fluoxymesterone powder (76-43-7) Specifications
Product Name Raw Fluoxymesterone powder
Kemikari Name Fluoximesterone; Fluoxymestrone; Halotestin; Androfluorene
muchiso Name Halotestin
Kirasi yeMishonga androgens.
Molecular Wsere 336.447 g / mol
Monoisotopic Mass 336.21 g / mol
Kunyorera Point 265 ° C
Biological Half-Life 9.2hours
chengetedzo Temperature Kwete dheinhare iripo
APane 1. rinoshandiswa mune varume vasingaiti zvakakwana zvezvinhu zvakasikwa zvinonzi testosterone.
2. kunobatsira kukonzera kukura kwepabonde zvakakwana (kuyaruka) kuvakomana.
Wchifukidziro chakakosha Fluoxymesterone powder (76-43-7)?
Uyewo inowanzozivikanwa seFluoxymesterone powder, Halotestin powder is androgenic anabolic steroid inogona kutorwa nemuromo nemuiti wehupi kuti ikurudzire kuwedzera kwemaviri masimba. Iyo inouya mumatatu matatu - 2mg, 5mg uye 10mg - uye ine mhando yezvipembenene zvisina kushandiswa zvinosanganisira calcium stearate, corn starch, lactose, sorbic acid uye tragacanth (kutumidza zvishomanana).
Iyi hormone yakafanana ne testosterone iyo inowanzoitika mumuviri wako, saka hazvishamisi kuti inowanzoshandiswa nevarume vasingagoni kubereka testosterone yakakwana yepanyama (kana kuti vakomana vanoyaruka vanotambura nekunonoka kuberekwa). Nokushandisa pfupa reHalotestin, rinogona kubatsira masimba, mapfupa uye hutano hwekuberekwa kuti urambe uine hutano hwakanaka, pamwe nekudzivirira musero kupera.
Iyo Yakakura Fluoxymesterone powder (76-43-7) mabasa
Mahomoni ndiwo makemikari ayo anogadzirwa nemaronda mumuviri, anopinda muropa uye anokonzera maitiro mune mamwe maviri. Kushandiswa kweHormone therapy kuporesa kenza kunobva pakucherechedza kuti mawaniro emakironi anodikanwa anodiwa kuti sero rakukura ari pamusoro pemamwe tumarara masero. Utachiona hweHormone hunogona kushanda nekudzikisa kubudiswa kwemamwe hormone, kudzivirira hormone receptors, kana kushandura makemikari akafanana nemasikironi anoshandiswa, asingagoni kushandiswa nechiremera chemaitiro. Mhando dzakasiyana dzemishonga inonzi hormone therapees inorongwa nemabasa avo uye / kana rudzi rwehomoni inoshandiswa.
Fluoxymesterone powder inotsanangurwa sey androgen. Androgens mahomoni akadai se testosterone uye androsterone inobereka kana kukurudzira kukura kwehukama hwemurume. Madzimai, mahomoni aya anogona kushandurwa kuva esrogen. Androgens sekurapa kwekenza inoshandiswa kupikisa basa resterogen, nokudaro kuderedza kukura kwekenza.
Raw Fluoxymesterone powder (76-43-7) Dosage
Nhamba yacho ichasiyana zvichienderana nemunhu, mamiriro ekurapa, uye kuoma kwayo. Zuva rega rega remuromo rinogona kupiwa zvinyorwa kana kuti zvakakamurwa (zvitatu kana zvina).
Male hypogonadism: Kunyatsoshandiswa zvakakwana mu hypo hypoadal male, chirwere chezuva nezuva che 5 kusvika ku20 mg chichakwaniswa muzhinji rwevarwere. Inowanzosarudza kutanga utano nemishonga yakazara yekurapa iyo inozogadziriswa pane zvaunoda. Priapism inoratidza kuwedzerwa kuwedzerwa uye inoratidza kuregererwa kwenguva pfupi kwechirwere.
Kutora nguva yekupera: Dhani inofanira kunyatsotumirwa kushandisa chirwere chakaderera, skeletal monitoring, uye nekudzikisa nguva yeutachiona kwemwedzi mina kana mitanhatu.
Inokonzerwa necarcinoma yezamu mukadzi: Inonzi yakarongedzwa zuva rega rega kuti chirwere chinoputika chinenge chisina kuvharika chekakoma chemuzamu i10 ku 40 mg. Nokuda kwechiito chayo chidiki, fluoxymesterone inofanira kuendeswa kune varwere vari mumakakatani, kwete kune rimwe chete, zuva rega rega kuti vave nechokwadi chekuchengetedza ropa. Muzvizhinji, zvinoratidzika zvakakosha kuti urambe uchirapa kwekunge mwedzi mumwechete kuti uve nekugutsikana kwekupindura mhinduro, uye kwemwedzi miviri kusvika mitatu kuitira chinangwa chekuita.
Raw Fluoxymesterone powder (76-43-7) tizvishandise
Iyi mishonga inoshandiswa mune varume vasingaiti zvakakwana zvezvinhu zvakasikwa zvinonzi testosterone. Muvarume, testosterone inokonzera mabasa akawanda anowanzoitwa, kusanganisira kukura uye kukura kwezvibereko zvemuviri, masimba, uye mapfupa. Inobatsirawo kukonzera kukura kwepabonde kwakakwana (kufaruka) muvakomana. Fluoxymesterone powder yakafanana ne testosterone chaiyo inogadzirwa nemuviri wako. Icho chiri chekirasi yemishonga inozivikanwa se androgens. Inoshanda kuburikidza nehutano hwemitambo mizhinji kuitira kuti muviri unogona kukura nekushanda zvakanaka.
Fluoxymesterone inogonawo kushandiswa mune vamwe vakomana vechidiki kuti vaite hupombwe mune avo vane nguva yekupera.
Tenga Raw Fluoxymesterone powder kubva kuBuasas.com
Raw Exemestane powder (107868-30-4)
Raw Letrozole powder (112809-51-5)
Raw Tamoxifen Citrate powder (54965-24-1)
Raw Anastrozole powder (120511-73-1)